हकप्रद र बोनसमा पूँजीगत लाभकर ५७ करोड ५९ लाख छूट | गृहपृष्ठ
Home लगानी हकप्रद र बोनसमा पूँजीगत लाभकर ५७ करोड ५९ लाख छूट
हकप्रद र बोनसमा पूँजीगत लाभकर ५७ करोड ५९ लाख छूट
काठमाडौं (अस) । हकप्रद र बोनस शेयरको पूँजीगत लाभकरमा लगानीकर्ताहरूले रू. ५७ करोड ५९ लाख छूट पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हकप्रद र बोनस शेयर विक्रीबाट भएको आम्दानीको करमा लगानीकर्ताहरूले उक्त छूट पाएका हुन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सो अवधिमा रू. १४ अर्ब ८० करोड २१ लाखको हकप्रद र बोनस शेयर विक्री भएको छ । त्यसमध्ये रू. २ अर्ब ३० करोड ४४ लाख कट्टा गरी १२ अर्ब ४९ करोड ७६ लाखमा ५ प्रतिशतले हुन आउने रू. ६२ करोड ४९ लाख असुल हुनुपर्नेमा रू. ४ करोड ९० लाखमात्र असुल भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गर्दा आउने अंकमा पुनः तीनपटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यलाई खर्च छूट दिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय २०६५ साल मङ्सिर २२ गतेको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकले गरेको हो ।
यो व्यवस्था पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि लागू भएको थियो । शेयरको वास्तविक तिरेको लागतलाई आधार नलिई बजार मूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा लागत खर्च बढी दाबी हुने गरेको छ । यसरी अंकित मूल्यभन्दा बोनस तथा हकप्रद शेयरको वास्तविक लागत बढी समायोजन भई पूँजीगत लाभकर घटी दाखिला भएको महालेखाको ठम्याइ छ । यसबाट परेको असर यकीन गरी राजस्व असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महालेखाले औंल्याएको छ ।